Isixhobo sokuBuyisa iphasiwedi. Isoftware yokubuyisa iphasiwedi yePST.
DataNumen Outlook Password Recovery sisixhobo esinamandla sokufumana kwakhona ipassword kwiifayile ezi-encrypted ze-Outlook PST. Ukuba uyalilibala igama eligqithisiweyo lefayile yePST efihliweyo, emva koko ngesi sixhobo, unokufumana ngokulula iphasiwedi kunye nokufikelela kwimixholo kwifayile yePST.
Ngoba DataNumen Outlook Password Recovery?
Ndisebenzisa i-Outlook 2010 kwisiphelo sam
Ndichithe iiyure ezi-5 namhlanje ndikhangela iwebhusayithi enikezela simahla okanye ngexabiso eliphantsi Ukubuyiswa kwephasiwedi ye-Outlook. Ndade ndayifumana DataNumen ngokugqibeleleyo
Ngaba siya kwenza inqaku kwiwebhusayithi yakho kwimeko apho kufuneka sithenge nayiphi na
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Inkxaso yeMicrosoft Outlook 97 ukuya ku-2019 kunye ne-Outlook yeefayile ze-PST ezifihliweyo zeOfisi 365.
Inkxaso yokufumana kwakhona iipasile kwibhetshi yeefayile ze-PST ezifihliweyo.
Idityaniswe neqokobhe leWindows, ukuze uphinde ufumane iphasiwedi kwifayile ye-PST efihliweyo kunye nomxholo (cofa ekunene) kwimenyu yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen Outlook Password Recovery Ukufumana kwakhona iiPaswedi ezivela kwiifayile ezi-Encrypted Outlook PST
Xa ifayile yakho ye-PST ibhalwe ngokufihliweyo kwaye ulibale ipaswedi yayo, ungayisebenzisa DataNumen Outlook Password Recovery ukuskena ifayile ye-PST kunye nokufumana kwakhona iphasiwedi.
Phawula: Phambi kokufumana kwakhona iphasiwedi kwifayile ye-Outlook PST enoguqulelo oluntsonkothileyo DataNumen Outlook Password Recovery, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile yePST.
Khetha i-encrypted Outlook PST ifayile enegama eligqithisiweyo:
Ungafaka igama lefayile yePST ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ifayile ye-PST encrypted kwikhompyuter yakho.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Outlook Password Recovery Ndiza starUkuskena kunye nokufumana kwakhona igama eligqithisiweyo kwifayile yePST efihliweyo. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba igama eligqithisiweyo kwifayile ye-PST efihliweyo inokuphinda ibuye ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo enje:
Ngoku unganqakraza i iqhosha lokukopa iphasiwedi kwibhodi eqhotyoshwayo, emva koko uyisebenzise ukuvula kunye nokufikelela kwifayile yePST efihliweyo kwi-Outlook.
Phawula: Iphasiwedi ayinakufana nale uyisebenzisileyo, kodwa inokuvula ifayile ye-PST efihliweyo ngaphandle kwengxaki.
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 ikhutshwa nge-9 kaNovemba ngo-2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.1 ikhutshwa nge-17 kaJuni, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.0 ikhutshwa nge-20 ka-Okthobha ka-2014
Inkxaso yeMicrosoft Outlook 97 ukuya kwi-2016 iifayile ezifihliweyo ze-PST.